System Beep Code များ
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Hardware Knowledge » System Beep Code များ
1 System Beep Code များ on 1st December 2009, 10:57 am
2 Re: System Beep Code များ on 4th December 2009, 6:05 pm
အဲဒါတွေဘယ်လိုသုံးရလဲဗျာ။ သားကပိန်းလို့example လေးတခုလောက်ရေးပေးပါလားဗျာ။ thank
3 Re: System Beep Code များ on 5th December 2009, 5:48 pm
အဲဒါတွေဘယ်လိုသုံးရလဲဗျာ။ သားကပိန်းလို့example လေးတခုလောက်ရေးပေးပါလားဗျာ။
4 Re: System Beep Code များ on 6th December 2009, 5:12 pm
ဥပမာ = ကွန်ပျူတာ က မတတ်ပဲ နဲ့ အသံပဲမည် နေတယ်ဆိုရင် 1 long, 1 short beep ဆိုရင် System board problem ဆိုပီး ပြောလို့ရပါတယ်....အဲဒါတွေပါ...
၀င်ဒိုးတင်ရင် Error အပြာရောင် Screen နဲ့ တတ်ပီး Error ကုဒ်တွေ ပြ ပါတယ်...အဲဒါတွေ ကို ရေးထားပေးတာပါ.....အဲဒီက ကုဒ်တွေ နဲ့ တူညီတယ်ဆိုရင် အဖြေရှာရလွယ်မယ်လို့တင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ.... [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: System Beep Code များ on 6th December 2009, 6:38 pm
6 Re: System Beep Code များ on 15th December 2009, 3:27 pm
အဲဒါတွေ က Mainboard Tester ကဒ် ပေါ်မှာ ပေါ်တဲ့ ကုဒ်တွေ ပါ.....အဲဒီ ကဒ် ၀ယ်ရင် အရင်က စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပေးပါတယ်....အခုနောက်ပိုင်း စာအုပ်မပေးတော့ပါဘူး....အဲဒါကြောင့်ပြန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...Reply နောက်ကျတာခွင့်လွတ်ပေးပါ....နေမကောင်းဖြစ်နေလို့... [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: System Beep Code များ on 15th December 2009, 8:24 pm
အဲဒါတွေ က Mainboard Tester ကဒ် ပေါ်မှာ ပေါ်တဲ့
ကုဒ်တွေ ပါ.....အဲဒီ ကဒ် ၀ယ်ရင် အရင်က
ရပါတယ်ဗျာ အားမနာပါနဲ့ ကျွန်တော်ကကိုလျှာရှည်တာဟီး [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: System Beep Code များ